Ny vidin'ny fitsapana tranonkala maimaim-poana | Martech Zone
Ny vidin'ny fitsapana tranonkala maimaim-poana
Alarobia, Jona 13, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Adihevitra iray ity izay mitohy hatrany amin'ny resaka Internet… maninona aho no mandoa vahaolana nefa afaka mampiasa malalaka? Mampiasa rindranasa maimaimpoana maro izahay - fa raha ny zavatra niainantsika teo amin'ny sehatry ny indostria, heveriko fa maningana amin'ny lalàna izahay. Amin'ny maha masoivohona anay dia ampiasainay tanteraka ny teknolojia hitantsika fa ilaina ary ampiasana azy io hanampiana ny mpanjifanay.
Imbetsaka izahay no mahita fa manararaotra vahaolana maimaimpoana ny mpanjifanay ary tsy manana fahalalana izy ireo hampiasa azy io na ny fahatakarana ny fiantraikany mety haterak'izany amin'ny ezak'izy ireo amin'ny varotra ankapobeny. Amin'ity tranga ity, ny olona ao Maxymiser nanao famakafakana ny fanandramana tranokala karama sy maimaimpoana ary nahita fa ny mpanjifa izay nanandrana ny fizahana karama dia manana valiny 600% tsara kokoa. Tsy tokony hahagaga anefa izany. Sehatra lehibe mazàna dia manana manam-pahaizana izay manampy anao hitondra vokatra amin'ny alàlan'ny sehatr'izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tombotsoany ho azy ireo ny maka antoka fa mampiasa tsara ny fampiharana azy ireo ianao mba hahazoanao tambiny lehibe amin'ny fampiasam-bola. Ny rindranasa maimaimpoana dia tsy manome izany!
Tags: ab testingfitsapana maimaimpoanamaxymiservidinyfiverenana amin'ny fampiasam-bolafitilianafitsapana tranonkala
Analytics amin'ny mpanjifa Enterprise, Analytics ara-tsosialy ary valiny
Fahazaran'ireo mpiantsena mialoha ny fividianana